Etazonia 1891 ny maty tao anatin’ny iray andro
Frantsa tao anaty fihibohana Olona 12 tapitrisa no very asa
Niala tanteraka ny fihibohana raha nihidy aman-trano nandritra ny 55 andro i Frantsa nanomboka omaly. Misokatra avokoa ireo toeram-pivarotana, sekoly, … ary afaka mifamezivezy an-kalahahana ny rehetra.
Joe Biden kandida ho filoha Amerikanina Misy manenjika ho nanao fanararaotana ara-nofo
Na mbola ady tsy fanta-piafarana aza hatreto ny resaka Coronavirus, dia efa manomboka mifantoka amin’ny fifidianana Filoham-pirenena afaka enim-bolana ny any Etazonia firenena isan’ny be matin’io valanaretina io.
160 502 ny isan’ny maty maneran-tany hetreto raha kely indrindra, 2 281 334 ny voa. Nahatratra 1891 ny maty tany Etazonia tao anatin’ny 24 ora farany, ka nampiakatra ny isan’ny maty rehetra ho 38 664 raha kely indrindra.
Aorian’i Etazonia, dia 23 227 ny maty ho an’i Italie, 20043 ho an’i Espagne, 19323 ho an’i Frantsa, 15 464 ho an-dry zareo britanika izay tsy tafiditra amin’io ireo maty any amin’ny toerana fitazonana ireo beantitra efa misotro ronono vinavinaina ho 7500 eo ho eo.
Mandrangaranga valifaty amin’i Chine
Hentitra dia hentity ra ny fanambaran’ny Filoha Amerikanina Donald Trump tao amin’ny Maison Blanche, fa hizaka ny vokatry ny nataony i Chine raha voaporofon-dry ny fanadihadiana nataony momba ny coronavirus, izay voalaza fa aretina nofroronina sy naparitaka ity. Nilaza kosa ny sinoa, tamin'ny alalan'ny Tale Lefitra ny ivon-toeram-pitiliana Coronavirus -n'i Wuhan Pr Yuan Ziming, fa tsy azo heverina velively, hoy izy, ny fihetsika tiana voizina handotoana an'i China izany. Fantatratray ny nataonay, fa asa fikarohana sy fanaovana fitiliana. Efa nilaza ihany koa anefa Frantsay Pr Luc Montagner nahazo ny Prix Nobel de Medecine tamin’ny 2008 noho ny fahitany ny VIH/sida, fa avy amin’ny VIH no namoronana ny covid-19.
Tombanana ho 300 000 ny ho faty
Tombanan’ny firenena mikambana na ny ONU ho lasa ivon’ny coronavirus ny Kaontinanta Afrikanina atsy ho atsy. Vinavinaina ho olona hatrany amin’ny 300 000 hetsy no ho faty aty Afrika. Manodidina ny 1000 ny maty aty Afrika hatramin’izao, ary olona 18 800 mahery kosa no efa voamarina fa voa. Fandriana 5 ho an’ny olona iray tapitrisa ihany no vonona ho an’ny Afrikanina, raha 4000 kosa ho an’ny any Eoropa, hoy hy OMS. 200 miliara dolara no vola tombanana fa ahafahan’ny Afrikanina miatrika ity areti-mandripaka ity.
Mirarakompana ny fanampiana
Nifarana tamin’ny faran’ny herinandro teo ny tatitry ny fivoriambe (réunions de printemps) nataon’ny Tahirim-bola Iraisam-pirenena na FMI Banky Iraisam-pirenena. Isan’ny noresahina ny fanampiana ara-bola ho an’ny firenena afrikana izay efa maro ny nisitraka izany. Nankatoavina, ohatra, fa homena famatsiana 115, 3 tapitrisa dolara I Burkina Faso ny FMI, 21,3 ho an’i Gambie, 114,49 ho an’ny Niger ary 442 tapitrisa dolara ho an’ny Sénegal. Mamatsy ihany koa ny Banky iraisam-pirenena. Nisy ampahan-trosa nofoanan’ny Club de Paris sy ny mpikambana ao amin’ny G20 amin’ireo firenena afrikana tena mahantra.
Tsy te hihiboka ny Amerikanina
Mitohy ny aty Afrika sy any Eoropa
367 no efa maty raha kely indrindra ary 2534 ny voa any Algérie, ka hotohizana hatramin’ny 29 aprily ny fihibohana, raha toa hatramin’ny 20 mey kosa ny any Maroc, izay efa 137 no maty, ary 2685 no voa. Ny any Etazonia firenena be maty indrindra dia misy ny hetsika fitakiana ny fanatsaharana ny fihibohana tamina tanàn-dehibe maro omaly, ka ny Filoha Donald Trump mihitsy no mamporisika ny vahoaka amin’io fanatsaharana azy io hanavotana ny toekarena. Notohizana hatramin’ny 9 mey kosa ny any Espagne, Royaume-Uni,…